Zava-dehibe ho an'ny mpanjono haran-dranomasina | Reef Resilience
Ny fanjonoana an-dranomasina dia loharanon'ny sakafo sy fidiram-bola ho an'ny olona manerana izao tontolo izao. Olona iray tapitrisa eo ho eo, izay any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana maro no miankina amin'ny trondro ho loharanom-pahalalana biby. ref
Ny vatoharan-dranomasina dia natao ho toerana fonenana ho an'ny trondro manan-danja maro, shellfish, ary ny tsy fahampian-tsakafo hafa izay mikendry ny hanarato. Any Etazonia, manodidina ny antsasaky ny fisian'ny rafitra ara-barotra federaly, ara-barotra sy ara-tsakafo, dia miankina amin'ny haran-dranomasina sy ny toeram-ponenana mifandraika amin'izany, toy ny gaza sy ny honko, ho an'ny ampahany amin'ny androm-piainany.
Fisher on the reef facing the forest Yela on the island of Kosrae, Micronesia. Sary © Nick Hall
Ny fikarohana dia manondro fa ny jono mpanjono haran-dranomasina dia manome vola an'arivony dolara ho an'ny toekarena any amin'ny firenena maro eran-tany. ref Ny fisamborana vatohara ho an'ny vatohara dia mendrika $ 6.8 tapitrisa isan-taona, ref ary mihoatra ny $ 100 tapitrisa isan-taona any Etazonia. ref
Ny fisian'ny fisondrotana amin'ny vatohara dia manome:
bola, sakafo ary fialam-boly,
manan-danja ara-kolontsaina sy ara-panahy,
Ny tetikasa ara-tontolo iainana manan-danja amin'ny haran-dranomasina (ohatra, herbivory), manohana ny fahasalaman'ny vatohara,
Fiarovana ara-tsosialy manan-danja ho an'ny olona raha tsy misy ny loharanom-pahefana hafa.
Tena ilaina ny mifandray mpandray anjara Nahoana no sarobidy sy ilaina ny fitantanana ny haran-dranomasina? Ny fanazavana etsy ambany dia manasongadina ny tombontsoa sasany amin'ny fanjonoana haran-dranomasina.
Tombontsoa momba ny trondro voahangy
Trondro reefatra hita ao amin'ny iray amin'ireo tsena trondro ao Kolonia, renivohitr'i Pohnpei. Sary © Nick Hall
Ny fisamborana vatoharan-dranomasina dia mendrika $ 6.8 tapitrisa isan-taona maneran-tany. ref
Ny fanjonoana fisakafoanana any Azia Atsimoatsinanana dia mamokatra $ 2.4 tapitrisa isan-taona, ref ary any Karaiba $ 395 tapitrisa isan-taona. ref
Ny seranam-piaramanidina ara-barotra sy ny fialamboly any Ozbeka dia samy miisa $ 100 tapitrisa isan-taona. ref Any Etazonia, manodidina ny antsasaky ny fanjonoana federaly no miankina amin'ny haran-dranomasina sy ny toeram-ponenana mifandraika amin'ny ampahany amin'ny androm-piainany.
Ireo jiolahin-java-manilona no fototra fisakanana voalohany ho an'ny firenena 24 ao Karaiba ary mitondra anjara lehibe amin'ny fanondranana fidiram-bola ho an'ny faritra. ref
Ny fanondranana entana amin'ny haran-dranomasina dia sarobidy kokoa noho ny 1% amin'ny fividianana tanteraka amin'ny firenena sy faritra 21, ary mihoatra ny 15% amin'ny fividianana entana any amin'ny firenena enina hafa. ref
Ny harona feno tratra dia ahitana ny trondro amin'ny andro. Sary © Tim Calver
Mihoatra ny arivo tapitrisa ny olona mandray soa avy amin'ny harena voajanahary ho an'ny sakafo ary loharanom-bola amin'ny alàlan'ny asa mifandraika amin'ny fanjonoana sy fizahan-tany. ref Tombanana fa ny antsasa-manilan'ny vatohara ho an'ny vatohara dia manome mihoatra ny antsasaky ny proteinina ateraky ny olona any amin'ny faritra tropikaly amoron-dranomasina. Loharanon-tsakafo hafa hafa koa izy ireo, toy ny vitaminina A, B, ary D, calcium, vy, ary iodine. ref Ny haran-dranomasina salama tsara dia mety hilefitra eo anelanelan'ny 0.2 sy 40 taonina maromaro taonina isaky ny km2 isan-taona, ary eo ho eo amin'ny sehatra 5 taonina isaky ny km2 isan-taona. ref Izany dia midika amin'ny fandaniana isan-taona amin'ny tondra-drano 1.42 tapitrisa taonina avy amin'ny vatohara manerantany manerana ny nosy andrefan'ny Nosy sy ny Faritra, ny olona dia mandany isan-taona ny isan'ny 29 kg trondro sy fako. ref Ny fihenan'ny trondro amin'ny harin-dranomasina dia avo indrindra amin'ny Maldives (180 kg / olona), izay manome ny 77% ho an'ny proteinina biby. Ny sivy amin'ireo mpanjifany lehibe folo dia ireo firenena sy faritanin'ny nosy any Pasifika, faritra iray izay mahalafo avo roa heny ny salanisa maneran-tany. ref Ireo tomban'ezaka ireo dia mampahatsiahy ny fanjifan'ny trondro ataon'ny mponina mpizahatany mitsidika ireo nosy.
Ny vatohara dia afaka manome fivelomana sy loharano izay miankina amin'ny fokonolona maro. Ny vondrom-piarahamonina Kia dia manangana trano eny ambonin'ny harambaton'izy ireo any amin'ny Nosy Salomao noho ny tsy fisian'ny tany amoron-tsiraka sy morontsiraka. Sary © Djuna Iveriegh
Misy ireo mpanjono madinidinika kely 15 eo amin'ny Coral Triangle rehefa tafiditra ao anatin'izany ny fotoana feno, ny fotoana sy ny fotoana ary ireo mpanarato lahy sy vavy. ref
Ny mpanjono mpanjono any Indonezia, Filipina, India, Vietnam ary Shina dia heverina ho isa amin'ny 100,000 ary mihoatra ny 1 tapitrisa isaky ny firenena. ref
Manodidina ny 300,000 olona no miasa any amin'ny sehatry ny jono any Karaiba. ref
Ny fisian'ny fisotroan-dranom-bary dia ankamaroany misokatra amin'ny varavarankely vaovaokely sy maoderina, ary maro ireo rafitra misokatra misokatra miaraka amin'ny vidin'ny fidirana ambany, ka mahatonga azy ireo ho tsara tarehy ho an'ny mahantra sy ny mpifindra monina. ref
Ny fandraisana anjara mavesatra indrindra amin'ny fanjonoana haranona (40% amin'ny mponina) dia nitatitra avy any New Caledonia. Ny Nosy Tiorka sy Kaikosy, ny Maldives ary Dominica koa dia anisan'ireo firenena manana ampahany betsaka amin'ny mpanjono haran-dranomasina (5-7% an'ny mponina). ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHarena an-tsokosokomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHo any amin'ny toeram-piarovana an-dranomasina sy ny fiveloman'olon-tokana maharitra: Torolàlana ho an'ny mpikarakara ny haran-dranomasina Karaiba
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSarintany fianarana ho an'ny fandrosoana maharitra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Toekarena Maneran-tany ho an'ny Coral Reefmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaratoana ho an'ny valiny: mampisy heviny ny krizy ara-trondro manerantanymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fiantraikan'ny fanodikodin'ny fanjonoana tsy maharitra